Home » Creative Writing » Aung San Suu Kyi ataglance
Aung San Suu Kyi ataglance By Wow
အ၀ှာအုပဒေအောင်ပွဲခြိမ့်ခြိမ့်သဲပီး သကာလ ကျောက်ဖြုံသီးစကပ်နဲ့ အုပ်… မိုးကြိုးလွှဲပါ တရားနာ ပိတ်သတ်ရဲ့….
အားလုံးဝိုင်းမဆဲခင်… လိုရင်းလေး ပြောရရင်….
ကလေးတွေ ပြန်ဂျပြန်ဂျ.. တန်းစီကြည့်မနေနဲ့
(အီနေရာမှစပြီး မန်းဂွဇက် ဒဂျီး မဖတ်ရ)
အဲ့မှာ စတွေ့တာ တရားနာပိတ်သတ်…..
၁၈နှစ်ပြည့် ဘုန်းကြီး မဖြစ်မနေ၀တ်ရမယ် အုပဒေလဲ ပြဌာန်းလို့မရ….
ဒဂါ/ဒဂါမဒွေလဲ ကိုယ်တော်တို့ပြန် အုပဒေ ထုတ်ပျဇေ…..
ကိုယ်တော်တွေ ဘောမရှိရ…. အဲလေ.. ဘောပွဲမကျိရ၊ (၂)လုံး (၃)လုံး မလုပ်ရ၊ အတိတ်စိမ်းမပေးရ….
နောက်တစ်ခုသေသေချာချာအသိပေးချင်တာက ဒီပုံပြင်ဟာ မဘသ မပေါ်ခင်ကထည်းကရှိခဲ့တဲ့ပုံပြင်ဖြစ်ပြီး ဘယ်သူ့ကိုမှ မရည်ရွယ်ပါဘူးလို့။
တစ်ခါကရွာတစ်ရွာမှာမြန်မာပြည်ပေါက်တရုတ်ကြီးလင်မယားဟာ သားသမီးမထွန်းကားရှာတော့ သားသမီးမွေးစားဖို့ကြံစည်သတဲ့။
“တီခလေးက မျိုးရိုးမီကောင်းဘူး။ သူ့အီဖေက အသားမည်းတဲ့မျိုးရိုး၊
သူ့အီမေက အကျင့်မီကောင်းဘူး။ သူ့အမေက ရီးစားများလယ် မီကြိုက်ဖူး၊ သူ့အီဖေကခိုးတဲ့အကျင့်စိလယ်..”
ဆိုပြီး အပြစ်ရှာပြီးချေးများနေတော့ မွေးစားခလေးတောင် မရနိုင်ဘူးဖြစ်နေသတဲ့။
ဒီလိုရှိနေစဉ် တစ် ရက်မတော့ တရုတ်ကြီးဟာ ကောင်လေးတစ်ယောက်ကို မွေးစားလိုက်တယ်ဆိုတော့ ဒီရွာထဲမှာဒီသတင်းဟာ အဆန်းဖြစ်သွားပြီး စုံစမ်းဖို့အတွက်
တရုတ်ကြီးအိမ်ကို လူတွေတော်တော်များများတောင် ရောက်နေကြတယ်ဆိုပဲ။ ဒါနဲ့လူတစ်ယောက်ကမေးတယ်……
အဘနိုင်ရင် လိုင်စင်ရှိ တြားဝင်ဖိနပ်စီးရမာ…… လိမ်မာဘာာာာ သာမီးးးး
အတွင်းခံကိုပါ လိုင်စင်ယူဝတ်ရမဲ့ ပါမစ်ပေးမှာရားးးး
ထွက်စရာ တောကလဲ ဥတေဇ ခုတ်လို့ ကုန်ဘီ။
နီနီခင်ဇော်… အဲလေ… ဇီဇီခင်ဇော်ကွ….
ခရက်ဒစ် – Soe Myint Thein
တော်ရုံတွေးတတ်တဲ့သူဆိုရင်တောင် ရေရှည်မြင်သာပါတယ်အေ… ဖင်ပိတ်ညင်းသူတွေသာ
(“ဒီခလေးက တကယ့်ကို ဆူတော်ကောင်းခလေးပဲ..)
အရီး တော့ အခု ရက် ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည် ရဲ့ မျက်နှာ ပရိုဖိုင်း လုပ်ပြီး FB ထဲ က
အခုထိတော့ အဆက်အသွယ် မဖြတ်ကြသေးဝူး။
ကျုပ်ကတော့…ပြီးခဲ့တဲ့လ.. အယ်ဒီချာ့အာဘော်ထဲ… ဦးသန့်စကား…” မြန်မာတို့ ဘာသာရေးလိုက်စားခြင်းကို… လျှော့သင့်သည်”ရေးလိုက်တာ… အဆဲခံနေရတယ်…။
ဗုဒ္ဓ ပြောတာတွေ က ဘာသာရေး မဟုတ်ဘူး ဆို။
အမှန်က… ဗုဒ္ဓဘာသာသာသနာဟာ.. ကိုးကွယ်ရာမဟုတ်..
မြန်မာစကားထဲ.. အသဲ(အသည်း)နဲ့.. နှလုံးလို.. တော်တော်ပတ်ရှုပ်နေ..
Credit to Andrew Aung
ဒါပေမဲ့ ခုချိန်ထိ ဒါမျိုး ဒေါ်စု တစ်ခါမှ ပြောပြပြီး မဲဆွဲတာ မတွေ့ဖူးဘူး။
ခု သူ့ပါတီကို မွတ်ပါတီလို့ စွပ်စွဲနေတာတွေကိုလည်း “ဘယ်သူက လယ်တီသိမ် ဖြိုတာလဲ။ ဘယ်ပါတီက ဘုန်းကြီးတွေကို မီးဗုံး ကပ်တာလဲ” လို့ တစ်ခွန်းမှ ပြန်မပြောဘူး။
လက်ရှိအစိုးရကို နင်းဖို့အတွက်ဆို ပြစ်ချက်တွေဆိုတာ နည်းတာမှ မဟုတ်တာ။
ရန်ကုန်ဆေးရုံကြီး တိုးတတ်လာတာတွေ။ လူငယ်တွေကို သင်တန်းတွေ ပေးပြီး အလုပ်အကိုင် ရစေတာတွေ။ ဒါတွေ တစ်ခုမှ မပြောဘူး။ ဒီအချိန်မှာ တဖက်ကတော့ ရွေးကောက်ပွဲပြီးမှ နောက်လမ်းတစ်ခြမ်း ခင်းပေးမယ်တို့။ အစိုးရအလုပ် အစိုးရ မလုပ်ပဲ ဒေါ်စုကိုတောင် ဘယ်လမ်းခင်းဖူးလဲ။ ဘယ်တံတား ဆောက်ဖူးလဲက အရှက်မရှိ လုပ်သေးတာ။ ဒါတွေက သူတို့ ပါတီ မလုပ်မဖြစ် လုပ်ရမှာတွေလေ။ သူတို့ အလုပ် သူတို့ မလုပ်ပဲ “ဟေ့ကောင် မင်းဘာလို့ ငါ့အလုပ်ကို ပြီးအောင် မလုပ်တာလဲ” လို့ အရှက်မရှိ သူခိုးက လူကိုဟစ်နေသလိုပဲ။
နောက်ဆုံး ပြောရရင် လက်ရှိ အာဏာရအစိုးရရဲ့ နိုင်ငံရေးသမားတွေဆိုတာ သူများနိုင်ငံက နိုင်ငံရေးသမားတွေထက် ပိုရွံစရာကောင်းပါတယ်။ သူများတွေက တဖက်သားရဲ့ အမှား (အားနည်းချက်) ကို နင်းတာ။ သူတို့က မရှိတဲ့ ချို့ယွင်းချက်ကို သူတို့ဟာသူတို့ ဖန်တီးပြီး သိက္ခာမရှိ ကျင့်ဝတ်မရှိ “နှစ်ခါလာ နှစ်ခါနမ်း” ဆိုတာတွေနဲ့ အော်ဂလီဆန်စရာကောင်းအောင်ကို ယိုသူမရှက် မြင်သူရှက် ဖြစ်လာသည်အထိ အောက်တန်းကျကျ ခြေထိုးဖို့ ကြိုးစားနေတာလေ။
မုဒိန်းကျင့်ခံနေပေမယ့် နောက်အပေါက်တော့ ရန်မရှာပါဘူး။ ကျေးဇူးကြီးလိုက်တာလို့ ရှာကြံ ချီးမွှန်းနေသလိုပဲ။ (နားနဲ့မနာ ဖဝါးနဲ့ နာပါ)။
“အရင်အစိုးရတုန်းက ဒါတွေ ရခဲ့လို့လား။ ခုမှ ရတာ မဟုတ်လား” ဆိုတော့
လဒူပိန်းတိန်းလေးတွေက ပြောပြန်တယ်။ “ကိုယ်လုပ်မှ ကိုယ်စားရတာ” တဲ့။ ကိုယ်လုပ်မှ ကိုယ်စားရမှာပေါ့။ ဘာမှ မလုပ်ပဲ စားချင်ရင်တော့ သူတောင်းစားသာ လုပ်တော့။ ဒါပေမဲ့ ကိုယ်တွေလည်း တရက် (၈) နာရီ လုပ်တယ်။ သူများတွေလည်း တရက် (၈) နာရီ လုပ်တယ်။ လုပ်ရတာချင်းတူတူ သူတို့တွေက ချောင်ချောင်လည်လည်။ ကိုယ်တွေကျတော့ ငတ်မသေရုံ စားရတယ်။ ဒါ ဘာ့ကြောင့်လဲဆိုတာတော့ မြင်အောင် မကြည့်တတ်ဘူး။
ဒီကြားထဲ ဘောပြေးပြေး “မ” ပြီး အဘွားအရွယ် အမျိုးသမီးကိုက အားရင်အားသလို ဝင်ဝင် အပုပ်ချရသေးတာ။
ချီးတွင်းထဲကျနေလို့ ဟိုက လက်လှမ်းပေးတာကို “ဟင့်အင်း မတတ်ချင်ဘူး။ အပြင်မှာ နေပူတယ်” လုပ်နေကြတယ်။
ပြောရရင် တဖက်က အောက်လုံးတွ သုံးပြီး တိုက်ခိုက်နေတဲ့အချိန်မှာ ကိုယ့်ဘက်က သာမာန်သမာသမတ်ကျပါတယ်ဆိုတဲ့ နိုင်ငံရေးသမားလောက်တောင် တဖက်သားကို မတိုက်ခိုက်ချင်တဲ့၊ ကိုယ့်ဂုဏ်ကို မဖော်လိုတဲ့ ဒေါ်စု နိုင်ငံရေးလုပ်ကို မလုပ်သင့်တာ။
ပြောလို့သာပြောတာ… ဒေါ်စုလွန်ကာလတွေ… နှစ်တွေမှာ.. မြန်မာနိုင်ငံရေးသမား.. ၂ဖက်လုံးကသူတွေ.. ကမ္ဘာတန်းအဆင့်တော်တော်များများ.. ရောက်သွားလောက်တယ်..။
တပြီလုံး ဘုန်းကြီး၊ မယ်သီလ မ၀တ်မနေရဆိုရင် ….. ၄ ဆင့် ၅ ဆင့်လောက် မြင့်သွားမာ
-အခုတစ်လော သင်ကန်းခြုံထားပြီး…မိန်းခလေး ငယ်ငယ်တွေတွေ့ရင်
-မ.ဘ.သ ထဲေ၇ာက်သွား ပလားမပျောတတ်